Izindatshana zika-Andrewrey Koptelov Martech Zone |
Imibhalo nge U-Andrey Koptelov
U-Andrey Koptelov uyi-Innovation Analyst e-Itransition, inkampani eyinkambiso yokuthuthukisa ama-software eyakhelwe eDenver. Ngolwazi olunzulu ku-IT, ubhala ngobuchwepheshe obusha obuphazamisayo kanye nezinto ezintsha ku-IoT, ubuhlakani bokufakelwa, nokufunda komshini.
Izindlela Ezi-4 Zokufunda Komshini Kuthuthukisa Ukumakethwa Kwemidiya Yezenhlalo
NgeSonto, uDisemba 20, i-2020 NgeSonto, uDisemba 20, i-2020 U-Andrey Koptelov
Njengoba abantu abaningi bebandakanyeka ezinkundleni zokuxhumana online nsuku zonke, imithombo yezokuxhumana isiyingxenye ebaluleke kakhulu yamasu wokumaketha amabhizinisi ezinhlobo zonke. Kwakunabasebenzisi be-intanethi abayi-4.388 billion emhlabeni wonke ngonyaka we-2019, kanti ama-79% abo babengabasebenzisi bezenhlalo abasebenzayo. Umbiko Womhlaba Jikelele Wedijithali Uma usetshenziswa ngamasu, ukumaketha imithombo yezokuxhumana kungaba nomthelela emalini engenayo yenkampani, ekuzibandakanyeni nasekuqwashiseni, kepha ukumane ube sezinkundleni zokuxhumana akusho ukuthi usebenzise